Akusayi kubakho ArcGIS 9.4-Geofumadas
NgoJanuwari, 2010 ArcGIS-ESRI
Ngenye ye zam izibikezelo zobuqili kulo nyaka 2010, ndizichazile ukuba akaboni ESRI nobuganga ukwenza inguqulelo enegama 9.4, yaye eneneni, kuye kwathiwa uguqulelo esilandelayo iya kubizwa ngokuba ArcGIS 10, yaye ziya kufumaneka kwi kwisiqingatha sesibini 2010.
Kwiindawo ezininzi I-comentadoNgokuka-ESRI, olu iya kuba lutshintsho olubalulekileyo hayi ekusebenzeni kuphela (igama) kodwa nakwisixhobo somsebenzisi (ubuso). Sicinga ukuba ezinye zazo zilungile kakhulu, nangona ngokuqinisekileyo izihlobo zolu khuphiswano, umhlaba oVulekileyo kunye nabasebenzisi abachongiweyo (bobabini) baya kuhlekisa besithi: Kwaye asisenzi nto loo nto?
Emva koko abasebenzisi abajwayele ukusebenzisa baya kuthetha Gqi beleni! Abo kuthi bakhuthaza ukuthandwa kwabo kuyakufuneka benze isiganeko esibalulekileyo (ngaphambi nasemva), siyazi ukuba utshintsho olufana nenyathelo 3x ukuya ku-8x luya kuba lude luqinisekise ama-64; kunjalo, uninzi lweencwadana ezikhoyo ziya kungena kwimbali ngaphandle kwexesha. Kodwa ngokuma kwe-ESRI kwihlabathi liphela, kuyakubakho ulonwabo olukhulu, nangona izinto ezintsha (esiza kuthi sizibonakalise kubukrelekrele bazo ukukhupha ukungoneliseki komsebenzisi.
-Ukufikelela kwiBettery kwizixhobo. Inokwenzeka loo nto, njengoko sibonile ArcExplorer, AutoCAD kunye ne-Ofisi, idibhoni eyaziwayo njengeRibhoni idibaniswe ukuxhomekeka kwezixhobo, ukulahla ukutshatyalaliswa kweebhokisi zamathuluzi ezikhuselekileyo kunye nefama engabonakaliyo.
Ukuqiniswa ngeCompCatalog. Ukuba esi sixhobo sihamba sodwa kuninzi kuye kwaba kukutsala, ngamanye amaxesha kuthatha ixesha ukuvula kwaye xa kulayishwa akusafuneki kuthi. Ngoku iya kulayishwa ngaphakathi kokusebenza okufanayo, mhlawumbi njengokuya kwi-AutoCAD Civil 3D kunye nokutshintshela kwi-AutoCAD yeMephu ujongano; Kuya kufuneka ukuba ubone ukuba ukufikelela komsebenzisi okukodwa kwidatha kungaphuculwa, ukuze utshintsho lwenziwe kwindawo yokugcina ulwazi ngaphandle kokuvala iileya ezilayishiwe (nokuba azikho ngokuhlelwa okwenziwe, okungafuneki ukuba ArcSDE) .
-Chukumisa ukukhangela imephu. Kuyathenjwa ukuba nendlela engcono yokukhangela idatha yendawo okanye yeetheyibhile, ngombono wangaphambili kunye namandla okulayisha angcono. Mhlawumbi ngenxa yoku baphosa iliso labo kwiindlela zokwenza ngezixhobo ezinje UDig kunye nekhathalogu yayo emangalisayo kunye donsa yerhamncwa.
-Ukuhamba kweenkqubo. Ukuza kuthi ga ngoku luhlobo lokucaphukisa, ngelixa ikhonsoli iqhuba inkqubo kuya kufuneka uyokufumana ikofu kuba ayinakwenziwa ngasemva. Ukwenza oku, mhlawumbi uthathe ingqalelo kwindlela akwenza ngayo oku qgis kunye neDig, ngoko ke kunokukwenza kube lula ukwenza i-routines ngaphandle kokuphazamisa umsebenzi wedeskithophu.
-Singathemba ukuba izixhobo zokuhlela ziya kuphucuka, nangona kuncinci okutshiwo malunga noku, kuphela ukuba ziya kusekelwa kwiiplette zamaqhosha eziqhelekileyo hayi kwiimenyu zangoku. Oku kuya kuba yinto eqhelekileyo kwiArcMap, ArcScene, nakwiArcGlobe. GvSIG nceda!
Ngokubhekisele kwimveliso ezikhutshiweyo, uphuculo lukhankanyiwe kulungelelwaniso lobeko oluninzi kunye neetekisi ezinamandla. Ithuba lokuvelisa oopopayi elibonisa utshintsho ekuhambeni kwexesha liye laqwalaselwa, into efana nezinto ezenziwa zii-GIS ezininzi.
-Kulawulo lwamaphepha-mvume, ukuba kunokwenzeka ukukhangela kunye nokungena-ilayisensi, kuthetha ukuba iphepha-mvume lingadluliselwa lisuswe kwidesktop liye kwiLaptop ukuze liyisebenzise ebaleni. Njengale nto yenziwa yiBentley Imephu.
Emva koko bathetha ngamanye amaphuculo ukwenzela ukuba ezinye iinkqubo zisetyenziselwa kuphela ababhemayo kakhulu: ukululaza i-API kunye neenkqubo ze-geocoding, intuitive (kulula ukuyisebenzisa), Inkxaso yamabhithi angama-64 nezinye izinto. Kodwa akuzange kubekho ntetho yokubeka phambili.
Ngokuqinisekileyo ayisiyi-ArcGIS 9.4. Zonke zibonakala ngathi zilutshintsho oluhle kakhulu, njengoko zivela kubasebenzisi abasebenzisa ezinye izixhobo kwaye kuboniswane nabo: Iyintoni inkqubo yakho encinane esingayenziyo?, ngokwahluka kunokuba endaweni yokuthethelela ukongama, umbono womsebenzisi umanyelwe. Ngokucacileyo, ayikokukopa nje into eyenziwa ngomnye umntu, ngokuqinisekileyo kukho imigangatho emibini yesakhiwo esiqhekeza ikhokhonathi ukubona ukuba intetho yesicwangciso sayo sonyaka esingakhange siguqulwe kwiPodcast.
... ngexesha elifanelekileyo, balinde iminyaka emibili yokunciphisa ukuvavanya ngaphambi kokuba bafumane ukuwaneliseka komdumisi.
Kwaye ulindele ntoni?
Post edlulileyo«Ngaphambilini Shintsha umbala wangemuva: AutoCAD okanye iMicstation
Post Next I-CAD, i-GIS, okanye zombini?Okulandelayo »
4 Ziphendula "Akusayi kubakho ArcGIS 9.4"
Iikati ngeepiki uthi:
Ukuba i-ESRI iphucule kakhulu iindlela zokuhlela (pseudoCAD) iya kuzuza kakhulu. Ngokombono wam, yinto encinci engabikhoyo, kunye nenqaku elichaziweyo.
Ndiyavuma Into yeLinux endibona ukuba inzima kwithuba nje elifutshane, kodwa into yokwenza izixhobo zokwakha kunye nokuhlelwa kwevektha kwisitayela seCAD andisiboni ukuba kutheni okwangoku kusafuneka siyenze ngaphandle.
... Ndiyilibele into ebaluleke kakhulu ... ndiyathemba ukuba ungaqhuba iArcGIS (kunye nezixhobo zayo ze-ESRI) kwi-LINUX ... ngaphandle kokusebenzisa ii-emulators. Kuba ukuba ndisebenzisa iGüindous kungenxa yokuba ndine-90% yexesha lam e-ESRI.
Ukukhupha kwaye uqhubeke GEOFUMANDO !!!!!!
Into endiyithembayo, ngaphezu kwazo zonke izinto:
I-1.- Yenza kube ngakumbi
2.- ukuba inomphathi wesiseko sedatha, imibuzo emininzi yokukhetha ngokulula kakhulu- -phi- ukusuka, kubonakala ngathi kwenziwe ngofudo. Nangona bephucule iikhilomitha ukusuka kwiinguqulelo ze-8.x kwi-9.x, ayibonakali kukhetho olulula xa kuthelekiswa ne-3.x yakudala ...
I-3.- Usuvele ushilo uluhlu lwamaninzi, endiyifumana luncedo, naphi na ukujonga kuyo.
I-4.- Izixhobo zokucocwa kwengqondo (kwideskithophu) ndifumanisa ukuba basenakho ukulungelelanisa ukwenza uhlaziyo ngokukhawuleza kwaye kungekhona, phantse.
Eminye ndiyavumelana nalo lonke uvavanyo ... (ewe ... andiyichukumisanga i-UDig, ke andinandlela yakuthelekisa)
Kwimeko yam, andilindelanga ukuba nditshintshe i-Autodesk (okanye kwimeko yeBentley. Abasebenzisi beMicrostation) kuphononongo oluntsonkothileyo ... kodwa kuya kuba kuhle.
Ewe ... ndiza kuyigcina inguqulelo yam engu-9.3 kude kube ngo-2012 ... ukuba ii-Mayan azisixeleli ngenye indlela